Paartii Demokiraatii fi Pirzi. Tiraampi abbaa seeraaa Ruth Ginsburg bakka bu'u yoom akka filatan irratti falamaatti jiran.
Demokiraatii fi Rippaabilikaan filannoo abbaa seeraa mana murtii walii galaa irratti falamaatti jiran
Ruth Bader Ginsburg abbootii seeraa mana murtii walii gala U.S. sagallan keessaa tokko. Bara 1993 keessa pirezidaanti Bill Kilintonitti bara 1993 keessa huji tanaaf filatee haga gaafasii hujuma sun irra jirti.
Jimaata dabre dhukkubuma duruu itti dedeebihaa bahe, kaanseriin ganna 87tti lubbuu dhabde jedhan.
Namii hujii tanaa filame yoo waan akka malee hamtuu hojjate malee haga jiru hujuma sun hojjata.Taatullee yaada siyaasa mataa ufii ka deeggaru qabaachuu dandaha.
Eegii Ruth lubbuu dhabdee carraan jiru ka pirezidaanti Tirampi abbaa fedhe bakka buufachuu dandaha.Taatullee kongireesii Amerikaa keessaa deeggarsa itti argachu baannaan hin taatuuf.
Amerikaan pirezidaanti filacuuf bultuma haga 41 hafe.Paartiin Demokiraati filannoon abaa mana murtii waliigalaa ilannoon duubatti tahuu malte jedhan.
Tiraampii fi paartiin isaa ammuma tahuu malte jedhan.Joe Bideniin paartii Demokiraati keessaa pirezidaantummaaf dorgomuuti jiru filannoo pirezidaantumaa Sadaasaa 3n moo’e abbaa fedhe filatu fedha.
“Warrii filatu dubbii tanaa fi ta dhibii qulqulleeffatee murteeffachuu male.Wannii biyya tanaa cuftii harka ummataa jirti. Harka ummata Amerikaa harka ummata nama filatuu,” jedhe.
Pirezidaanti Doonaldi Tiraampi ammoo torbaanuma kana keessa abbaa seeraa mana murtii walii galaa filchuu fedha .Haga ammaatti Ruth waliin dubartii mana murtii walii gala Amerikaa lama.Tiraampilleen dubartii filachuu fedhallee.
Jecha kanaan dubartoota yaada paartii isaa deeggaran baaddiyaa magalaaan dhiyaatanii fi keessattuu warra yaada ulfa ufi irraa baasuutti hin deeggarretti dubbii dhaamate.
"tti gaafamata seerii naan kenneen hojjachuuti jira.Tanuma.Tana tolchuuf itti gaafatama qaba.”
Abbaa fedhu mana murtii walii galaa keesatti argate jechuun 6-3 taati. Abbootii seeraa yaada paartii isaa qaban 6 gama kaaniin ammoo 3 taati.
Akka kanaan Tiraampi filatamee dhibaatellee yaadi jarii paarti isaatii qabu hinuma jiraata jechuu.
Barbara Perry, yuniversitii Verjiiniyaa damee milleri keessatti daarketera qorannoo pirezidaantotaatati.
Muraa mana murtiitii fi siyaasaan Amerikaalleen harkuma warraa jira.Gadaa abbaa hedduu dubbii muraa bahan. Akkana tanaan ammoo Demokiraatotaaf sodaa jabduu.
Manii murtii walii gala Amerikaa harka jara yaada Tiraampi qabutti deebinaan:
Caasaa fayyaa Amerikaa bara Obaamaa keessa bahe hafuu dandaha.
Namii akkuma fedhetti dhiiraa fi dhalaa hin jedhuu namii akkuma fedhetti wal fuudhuun rakkoo keessa seenuu dandaha.
Dubartiin gargaarsa Horii mootummaa itti argattee garaacha ufi irraa baasuun mirga isii tahe gufachuu dandaha.
Seerii jijjiirama qilleensaatii fi bahellee irraa hambsiisuu dandaha jedhanii sodaatan.
Taatullee Tiraampi akka nama abbaa seeraa Ruuh bakka bu’u filannoon duratti filatan paarti isaa Rippaabiikaanitti dhaamate.
Demokiraatotii filannoo tana dhaabuuf maan akka tolchan diidessani hin dubbanne.
Ammatti paartii Rippaabilikaan keessaa Senator Alaskaa Lisa Murkowski fi Senator Maine Susan Collins ufiifuu marroo itti filatamuun shakkii keessa jirutti abbaa seeraa mana murtii wali galaaa filannoo pirezidaantmmatiin duubatti tahuu male jechuutti jira.
Rippaabilikaan keessaa namii afur paartii Demokiraaitti dabalamee abbaa seera amana murtii walii galaa filannoon duubatti filu malan jedhaniin jennaan harka guddaa waan taateef filannoon duuba taati.
Amerikaan filannoo pirezidaantummaatiif kurfoo jirti.Ammatti haga guddaan Joe Bidenitti Tiraampi dura jira.
Qalbiin namaa amma filannoo abbaa seeraa mana murtii irra jirtu yaaada namaa haga akka jijjiirtu beekuu baannullee namii Amerikaa vayireesuma kana keessa filannoof kurfo jira